PVC Handrails-Ihwo hunhu hwevc staircase handrails
1. Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: kushandisa yakakwira polymer PVC zvinhu, isina-chepfu, isiri-kusvibisa, murazvo-unodzora, hapana murazvo wakashama.
2.Durable: hapana kutsemuka, hapana shanduko muchimiro, hapana zvipembenene, hapana hunyoro, kunyanya inokodzera nzvimbo dzemahombekombe nemhepo ine mwando.
3. Yakanaka: akasiyana siyana mavara kusarudza kubva. Inowanzo shandiswa ndeyekuteedzera walnati, kuteedzera pichisi, kutevedzera paini, kuteedzera tsvuku beech, kutevedzera machena, nezvimwewo, rine ruvara rwakatsvuka, runako uye runako.
4.Economy: Yakatemerwa mune chero saizi yekudzora kurasikirwa kunokonzerwa nezvinhu zvisina kujeka.
5. Kuzadza kwakasiyana siyana: mhango dzekubata, mari. Akajeka mabhanduru, mwenje unogona kuvhenekera vanhu. Akaomeswa mahandrails haatsemuke kwezana ramakore.
Tsananguro ye Expandable Trellis Fence
Expandable Trellis Fence inowanda trellis fenzi, yakagadzirwa nePVC. zvakatipoteredza zvine hushamwari zvinhu, fashoni uye chaizvo. Iko kutaridzika kunokutorera kunakirwa uye kugadzikana, kunogona kuve kwakasarudzika, kuchikubvumidza iwe kuti ugadzirise huremu zvinoenderana nezviyero zvaunoda.
PVC Yakavanzika Fenzi
1. Kuchenesa kwakaderera- ingosasa pombi
2. Haambodi kupenda kana kusviba
3. kungofanana nevinyl siding uye vinyl windows extrusions haizoite yero, ngura, kuora kana kuora
4. Inonyanya kugadzirirwa simba nekusimba pasi pemamiriro ekunze ese
5. Yakagadzirirwa kuchengetedzwa pasina pachena zvipikiri, screws, kana mabhureki
6. Hachina mishonga ine chepfu
7. Zvakatipoteredza zvine hushamwari uye 100% inogadziriswazve
8. Inowanikwa mune chena, tan, grey, adobe, woodengrain ruvara
9. Inesarudzo njanji yekuvharira system inobata njanji njanji dzakasimba munzvimbo
10. Nyore kuisa
Horse Fence / Fence Fence / Munda Fence / Isiri-kukwira Animal Plastic Fence
3.Inogona kushandiswa sehuni
4.Splinter-yemahara / Frost chiratidzo
5.Insensitive kune fungi uye zvipembenene
6.Do haina kuburitsa chepfu zvinhu munzvimbo
7.Wear nemishonga / ngura nemishonga / Anti-UV
8.Kusingaorere / kusingafadzi
9.Full huwandu hwesayizi huripo, nezvimwe
10.Used zvikuru mupurazi, mupfuwo, mugwagwa, kuvaka, horticulture, gadheni, nezvimwewo.
Yakareruka kukwana, yakaoma gadziriso mhinduro iyo isingade chakakosha maturusi ekuisa
Inogona kuiswa mune chero mamiriro ekunze
Inodzivirira denga kubva kumvura ingress uye kukuvara kwemhepo kumucheto